Bitcoin Sportsbooks Bvisai Kufara Mukumhanya Kwemitambo - Bitcoin Odds Checker
Kune nzira dzakawanda dzekutengesa pamitambo yemitambo, iyo inosanganisira kupinda mukutarisana nemabhaki emunharaunda kana mafoni ekutengesa kubasa. Sezvo kuwedzera kwekutengesa kwepaIndaneti, bhazinesi yeBitcoin yakanyanya kuonekwa mumazuva ese. Nhasi, imwe yenzira dzakasarudzwa yekubheja pamitambo yepaIndaneti ndeyezvikwata zveBitcoin-powered.
Kusarudzwa kwe Bitcoin sportsbook brands inoramba ichingowedzera uye dzimwe nzvimbo dzekupa zvipo zvakasiyana nekuwedzera eSports uye kunyange mitambo yekaseino sechikamu chebasa ravo. Kushandisa iyi masayiti ndiyo nzira inonyanya kukosha uye yakakosha yekubheja pamitambo uchishandisa bitcoins. Iwe unotofanira kusarudza chikwata chinokwanisa kukwanisa zvaunoda uye zvinhu zvose zvinofanira kunge zvakanyatsofamba-kufamba. Zvechokwadi, kuenda kune mabhuku akakurumbira kunofanira kugara uri pane zvaunotarisa, izvo zvidzidzo zvedu zvemitambo zveBitcoin zvinogona kupa.
Mutambo kutengesa nirvana
Kunyange zvazvo vamwe vangafunga kuti mitambo yepaIndaneti kutengesa inouya nemutengo, Bitcoin mitambo yokubheja rinovimbisa kuti munhu wose anogamuchirwa noushamwari. Hazvina basa kuti iyi ndiyo nguva yako yokutanga kubheta pabhodhi kana kuti NFL, hazvina basa kana iyi ndiyo nguva yako yokutanga kubheta ne bitcoins. Chimwe nechimwe chikamu chakagadzirirwa kuti munhu wese ave chikamu chemufaro.
Ichokwadi kuti iwe unogona kuisa mavhiri chero nguva yaunoda ndeimwe yezvinonyanya kukosha zvekutengesa pabhodhi reBitcoin. Taura Bitcoin uye iwewo uwane rubatsiro rwekubhadhara kwe cryptocurrency, iyo inopa nzira yekukurumidza kuisa mari uye kubvisa mari, mabheti asingazivikanwi, kushandiswa kwemari shoma, nekushaiwa kwezvimwe zvipi zvinokudzivisa kuisa mabheji.
Kusarudza kwatinofanira kutamba
Kusarudza izvo Bitcoin sportsbook kuti uende kune chisarudzo chaunofanira kudzoka neshoko rakasimba. Nokuda kweizvi, unogona kuvimba nemapeji edu ekuongorora mapeji eBitcoin kuti ataure nzvimbo yakagutsa mitemo yako. Uyezve, kufunga nezvezvinhu zvakadai sekubhadhara, mabhonasi, kutsigirwa kwevatengi, uye kuvapo kwezviitiko zvemitambo unoda kubheta zvinofanira kuisa pamusoro pezvinhu zvako zvakakosha.
Tanga kutengesa mushure mekunge wakasika bheti rekuita nepepu yaunosarudza. Iwe uchashamiswa kuti kufamba kwakanaka uye kunobatsira pamitambo ne bitcoins kunogona kuva.
Los Angeles Sparks (Vakadzi)
Atlanta Dream (Vakadzi)